Maitiro ekujekesa maaramu kubva kuApple Watch yako IPhone nhau
Maitiro ekudzima maalarm kubva kuApple Watch yako
Kuva nekuchaja yedu Apple Watch husiku hwese zvinokanganisa, asi sezvo pasina chakaipa icho kuti chakanaka hachiuye uye iwe unofanirwa kutora mukana kune chero mamiriro ezvinhu kuti utore mukana nazvo, hapana chinhu chiri nani pane kubhadharisa yako Apple Watch husiku pane yako husiku hwehusiku uye zvichingodaro.ishandise seawa rewadhi. Iine huwandu hwekuchaja madoko anowanikwa nemhando dzakasiyana dhizaini, uye neiyo nyowani yemubhedha wachi chinhu icho iyoOSOS 2.0 inotipa isu, zvinonetsa chaizvo kupotsa. Asi chii chatinoita nema alarms iwayo atinoisa zuva rimwe chete uye asisiri kushandisa? Isu tinorega runyorwa rwema alarm ruchikura zvisingadzoreki? Tinotsanangura sei kubvisa iwo asingabatsiri maaramu munzira mbiri dzakasiyana: zvakajairwa uye zvinokurumidza.
Kuisa alarm paApple Watch kune nzira mbiri dzekuita: uchishandisa alarm wachi app, kana kushandisa Siri kugadzira alarm nyowani. Huye, helium Irani vane dzimwe nzira mbiri.
1 Maaramu kushanda
Famba iko maAlarm application pane yako Apple Watch uye iwe uchaona iyo rondedzero yema alarm ese awakambo gadzira pawachi yako. Nekudzvanya pane alarm (kwete bhatani kuti riite iyo) iwe unokwanisa kuwana iyo yekugadzirisa menyu, uye iwe uchafanirwa chete enda kune zasi kwemenu kuti uone iro bhatani bhatani uye nekudaro ukwanise kuidzima. Iwe uchafanirwa kudzokorora kuvhiya rimwe nerimwe kusvikira iwe wabvisa zvese izvo zvausingachadi kushandisa.
Asi kana iwe uchida kudzima runyorwa rwese uye usingafanire kuenda rimwe nerimwe, Siri inoita kuti zvive nyore kwazvo kwauri. Unongofanira kukumbira mubatsiri wewachi yako (nekuti "Hei Siri" kana nekubata korona kwemasekondi mashoma) mukumbire kuti abvise maalarm ese kwauri. Sezvauri kuona mumufananidzo Siri anokukumbira yekusimbiswa uye kana iwe uchibvuma hakuchazove nemaalarm akachengetwa pawachi yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekudzima maalarm kubva kuApple Watch yako
Siri anovandudza mhinduro dzayo-joke nezve iro rinokosha ramangwana